“မြမြ ရုပ်ရှင်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် မုဒိမ်းကျင့်သူ ၃ဦး ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ”
“မြမြ ရုပ်ရှင်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် မုဒိမ်းကျင့်သူ ၃ဦး ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ” ပရိသတ်တွေကြားမှာ အရမ်းကို ဟော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြမြသရဲ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့သင်္ကြန်ရဲ့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်က စတင်ကာ အများပြည်သူတွေ နဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွေမှာ ပျံ့နှံ့လို့နေပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာကို အခြေခံကာ မုဒိမ်းမှုပပျောက်ရေးအတွက် ပညာပေးရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ရပ်မှန် […]
ဖြူဖြူကျော်သိန်းကို ရှက်သွေးဖြာပြီး မျက်နှာပူသွားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ MM IDOL ပြိုင်ပွဲဝင်လေးBROWN
ပရိသတ်တွေ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးက ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးက အခုဆိုရင် Season4ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်း တဖွဲဖွဲ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကို ခံရဦးမယ့် […]
အတူသွားတဲ့ အနုပညာရှင်​​တွေ​တောင်​ အားကျရတဲ့ ​မော်​ဒိုက်​ခရီးစဉ်​က Romantic အဆန်​ဆုံး စုံတွဲ​လေး အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးကြတာချင်းတူတဲ့အပြင်​ စိတ်​ထားနူးညံ့တာချင်းလည်းတူတဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီး​မောင်​နှံနှစ်​ဦးက​တော့ ချွဲတတ်​တဲ့ ​ကောင်​မ​လေးနဲ့ အလိုလိုက်​တဲ့ ကိုကြီးတို့ရဲ့ အိမ်​​ထောင်​​ရေးမျိုးမို့ အရမ်းကို Romantic ဆန်​လွန်းလှပါတယ်​။ ချစ်​ရတဲ့အနုပညာအလုပ်​​တွေလုပ်​ရင်း သာယာ​ပျော်​ရွင်​တဲ့ […]
မင်းသမီးရှုံးရလောက်အောင် ချောမောလှပတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်ရဲ့ သမီးလေး ထင်သစ္စာ နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ခင်ဇာခြည်ကျော် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ခင်ဇာခြည်ကျော်က သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးနဲ့ အတူ အနုပညာအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ရင်း ဘဝကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဇာခြည်ကျော် ရဲ့ သမီးလေး ထင်သစ္စာ က […]
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ မူလတန်းသင်ရိုးမှာပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီး…လက်ရှိ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်… ဒါ့အပြင်သူမဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. အဲဒီလို မြန်မာကသာမက ကမ္ဘာကပါသိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ မူလတန်းသင်ရိုးစာအုပ်မှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်… အဲဒီ […]
Korea ရုပ်သံ KBS ရဲ့ Winner ဆုကိုရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကရင်တိုင်းရင်းသူလေး ပရိသတ်ကြီးရေ ချစ်စရာအသံချိုချိုလေးနဲ့ သီဆိုထားတဲ့ “အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုနားထောင်ဖူးကြမှာပါနော်..အဲဒီ သီချင်းနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာသူကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကရင်မလေး နော်မာသထူးဝါးပါပဲ… သူလေးကတော့ ကိုရီးယားမှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာ၊ ကရင်လူမျိုး […]
ဝမ်းသာစရာ သတင်းလေးပါ “ဝင်းနဲ့ဇော်”အတွက် လွတ်မြောက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများလာပြီဟု ရှေ့နေဦးအောင်မျိုးသန့် ပြောကြား
ပရိသတ်ကြီးရေ … ဝမ်းသာစရာ သတင်းလေးပါ…. ဝင်းနဲ့ဇော်အတွက် လွတ်မြောက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများလာပြီဟု ရှေ့နေဦးအောင်မျိုးသန့် ပြောကြား…… ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဆူရတ်ဌာနီခရိုင်ရှိ ခိုတောင်ကျွန်း (လိပ်ကျွန်း)မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် က ဗြိတိန်နိုင်ငံသား (၂) ဦးကို သတ်မှုနဲ့ သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့…. ဇော်လင်းနဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်းတို့ သေဒဏ်ကနေ […]